Khilaafka UCID iyo Maxkamada Sare: Qalinkii Gudoomiye ku xigeenka 3aad ee Xisbiga UCID Cali Guray. - Haldoornews
(Ciid Mubaarik Wa Kulu Caam Wa Antum Bi Kayr)
Ku noqon maayo marxaladihii uu soo maray khilaafka UCID oo waxan ogahay in inta xogogaalka ihi ay ka dheregsan tahay heerarkii kala duwaanaa uu soo maray xal u helista khilaafka soo jiitamayay mudadii sanad iyo badhka noqonaysay.
Waxa la ogyahay markii Faysal Cali Waraabe gar iyo garawsho midna aanu ka waynay ee marka la isku dayo in wax la isu keenaba uu xaalkiisu noqday ka dar oo dibi dhal iyo in uu doono in qaladkiisii hore uu qalad kale ku saxo waxay ka fursan wayday in xalka aanu ka doono sharciga oo aanu ku kala baxno sharciga anaga oo u siman.
Khilaafka UCID waxanu u aragnaa inu ka dhexeeyo Faysal oo ah dhinaca garta daran iyo Xisbiga UCID gaar ahaan garabkii uu hogaaminayay musharaxa xisbigu Jamaal Cali Xuseen oo ah dhinaca laga garta daran yahay. Sababta oo ah halka ay sartu ka qudhuntay ee khilaafku ka dhashay ayaa ahayd Heshiiskii Bedbaadinta Xisbiga UCID ee labada dhinac ay hore u wada galeen ee xisbigu ku guulaystay in uu noqdo xisbi qaran kana badbaadiyay in aanu daaqadda ka bixin sidii xisbul xaakimkii hore ee UDUB Alleh ha u naxriisto eh.
Markii uu Xisbigi soo baxay ee uu isu diyaarinayo sidii uu higsigii bahwaynta UCID u xaqiijin lahaa una beegsan lahaa inu noqdo Xisbiga ka taliyaa Somaliland waxa dhacay wixii dhacay! oo keenay in Gudoomiyihii xisbigu uu ka talo goostay xisbigiisii isaga oo si badheedh ah ula soo saftay xisbi kale. Isaga oon u danaynayn xisbigiisa ayuu gebi ahaanba daaqadda ka tuuray heshiiskii uu dhinaca ka ahaa ee isaga laftiisu uu sexeexay iyo dhamaan qodobadii Go’aankii ka soo baxay Golaha Dhexe ee Xisbiga oo kuligoodba waafaqsanaa Xeerka Xisbiga. Intaas uun kumuu joogin ee wuxu si badheedh ah ugu tuntay gabi ahaanba Xeerkii Xisbiga oo uu ka dhigay in uu yahay xibir calal waraq.
Go,aankii Gudida Diiwaangelinta markii hore waxanu filaynay in uu kala cadeeyo dhinaca garta leh iyo dhinaca garta daran laakiin may dhicin ee waxay gudidi qaadatay go’aan kale oo ay labadayadii dhinac ku amartay in aanu Heshiiskii hore loo wada galay ku dhamaystirno anaga oo siman Shirwayne gaar ah oo aan caadi ahayn oo u gaar ah dhamaystirka dhamaan qodobadii Heshiiskii Badbaadinta UCID. Si kastaba xaalku ha ahaato eh anagu waanu ogolaanay go’aankii gudida sababta keliya eenu u aqbalnayna waxay ahayd in hadii Faysal laga helayo oo ogolaado lagu soo af jari karo khilaafka UCID muddo 45 maalmood gudahood ah.
Laakiin nasiib darro Faysal wuxu marba kala hadlo oo waan ogolahay iyo ma ogoli iyo waan ka soo tashanayaa yidhaahdoba goor dambe oo dhawriyo labaatan maalmood uu werwareegayay oo isagu keligii isku maqnaa ayuu ka qaatay rafcaan Go’aankii Gudida Diiwaangelinta oo Maxkamadda Sare u qaatay. Adigu wakhti ka dib Maxkamadda Sare waxay mudaysay 18ka bishan dhegaysiga dacwadii khilaafka UCID ka dibna waxay ka soo saari doontaa Go’aan kama dambays ah. Go’aankaa oo ku saabsan soo af jarista khilaafkii soo jiitamayay mudada dheer ee Xisbiga UCID ayaa noqon doonaa go’aan UCID ahaan ama lagu wada go’aan qaato ama lagu kala go’aan qaato gaar ahaan labada dhinac ee isku hayay khilaafka UCID. Waayo labada dhinac midna xaq uma yeelanayo inu racfaan dambe ka qaato Go’aanka Maxkamadda Sare ee wuxu noqonayaa kama dambayn. Ama cadaalad ha u dhaco ama cadaalad darro eh waa lagu wada qasban yahay. Dhinacayagu waxa aanu doonayno oo dhami waa cadaalad, wax ka badan maaha wax ka yarna maaha.
Sidaa daraadeed Maxkamadda Sare waxan ugu ducaynayaa” ILAAHAY XAQA XAQNIMO HA U TUSO RAACISTIISANA HA KU ILHAAMIYO, BAADILKANA BAADIL HA U TUSO KA DHEERAANSHIHIISANA HA KU HANUUNIYO”
Dhan kastaba ha u dhaco eh natiijada khilaafka UCID inta sugaysaa maaha UCID iyo dhinacyada isku haya oo keliya ee Somaliland oo dhan ayaa dhwaraysa bal waxa ka soo yeedhi doona Maxkamadda Sare. Dhan kastaba ha u dhaco eh wuxu saamaynta ugu wayn ku yeelan doonaa masraxa siyaasadda ee Somaliland gaar ahaan labada xisbi ee kale oo laga yaabo in aanu UCID maanta xisaabtaba ugu jirin.